ရောင်းရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်စီးပွားရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း ၃ မျိုးကိုအထူးပြုပေးသည်
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုရောင်း ၀ ယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အဖြေတစ်ခုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ ရောင်းရန်အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ ရောင်းရန်လုပ်ငန်းငယ်၊ ရောင်းရန်အသေးစားများ၊ အရောင်းပြခန်းများ၊ ရောင်းရန်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရောင်းရန်ကားရေဆေးခြင်း၊ ပိုင်ရှင်များပိုင်ရောင်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရောင်းရန်အတွက်ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ ရောင်းရန်အလှပြင်ဆိုင်၊ ရောင်းရန်ပီဇာဆိုင်များ၊ ရောင်းရန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ရောင်းရန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်း franchise၊ ရောင်းရန်စူပါမားကက်၊ ရောင်းရန်စားသောက်ကုန်ဗန်များ၊ ရောင်းရန်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး၊ ၊ ရောင်းရန်ကဖေး၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ရောင်းရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဘာဂါဗန်၊ ရောင်းရန်စားနပ်ရိက္ခာထရပ်ကား၊ ရောင်းရန်ထရပ်ကားများ၊ အရောင်းပြခန်းများ၊ ရောင်းရန်အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်၊ ရောင်းရန်ကိတ်မုန့်၊ ရောင်းရန်နိုက်ကလပ်များ၊ ရောင်းရန်ဓာတ်ဆီစုပ်စက်၊ ရောင်းရန်အစားအစာဗန်၊ ရောင်းရန်ကုမ္ပဏီအစရှိသဖြင့်။
သင့်အတွက်စီးပွားရေး ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးပွဲစားများနှင့်စီးပွားရေးရှေ့နေများကိုဆက်သွယ်ပါ။
CRM Setup နှင့်ပေါင်းစည်းမှု
အိုင်တီထုတ်ကုန်များနှင့် Domain၊ Hosting၊ cloud ဖြေရှင်းမှုများ၊ စိတ်ကြိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုများ
တရားဝင်လိုက်နာသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် ၀ န်ထမ်းလက်စွဲများ
စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြပါ။
သင်၏စီးပွားရေးစာရင်းပြုစုပါ quick Connect ကို
စီးပွားရေးပွဲစား ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကျယ်ပြန့်သည့်စီးပွားရေးပွဲစားများနှင့်ဖောက်သည်များမှတဆင့်စီးပွားရေး ၀ ယ်ရန်မျှော်လင့်လျက်အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ အခွင့်အလမ်း၊ အသေးစားစီးပွားရေး၊ အရက်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကားရေ၊ ပိုင်ရှင်၊ ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာဗန်များ၊ စတိုးဆိုင်၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ ဓာတ်ဆီစုပ်စက်၊ ကဖေး၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း၊ မုန့်ဖို၊ အစားအစာဗင်ကား၊ ဘာဂါဗန်များ၊ အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာထရပ်ကား၊ ပီဇာဆိုင်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အလှပြင်ဆိုင်များ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်း၊ ထရပ်ကားလုပ်ငန်း၊ ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးစက်များ၊ နိုက်ကလပ်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ အလှပြင်ဆိုင်များ၊
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ် ၀ ယ်ရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၏အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
တတ်နိုင် ရောင်းရန်စီးပွားရေး | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးရောင်းရန်စီးပွားရေးပွဲစားများ | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးရောင်းရန်အတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးရောင်းရန်စီးပွားရေးရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောကွန်ယက်ရှိသည်။ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ၀ ယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးရှေ့နေများကတရား ၀ င်စနစ်နှင့်စည်းမျဉ်းများအရစစ်ဆေးသောတရားဝင်စီးပွားရေးကိုသာအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စတိုးဆိုင်၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ ထရပ်ကားလုပ်ငန်း၊ ပီဇာဆိုင်များ၊ ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးများ၊ ကိတ်မုန့်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတို့ပါဝင်သည့်လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရောင်း ၀ ယ်ရန်တောင်းဆိုမှုများစွာကိုလက်ခံရရှိသည်။ ကော်ဖီဆိုင်၊ အသေးစားစီးပွားရေး၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုင်ရှင်မှရောင်းချရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး၊ ကားရေဆေး၊ အစားအစာထရပ်ကား၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဘာဂါဗန်၊ စူပါမားကက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ , စတိုးဆိုင်, ဓာတ်ဆီစုပ်စက်, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်လည်းဝယ်ယူရန်မြေ။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးနှင့် 106 နိုင်ငံများဝယ်ယူရန်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ။
တတ်နိုင် ဝယ်ယူရန်အတွက်စီးပွားရေး | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ခြင်းအတွက်စီးပွားရေးပွဲစားများ | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ခြင်းအတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူရန်စီးပွားရေးရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများသည်နိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများငှားရမ်းခြင်း၊ ငှားရန်ထရပ်ကားလုပ်ငန်း၊ ငှားရမ်းသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ငှားရမ်းသောအလှပြင်ဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်များငှားရမ်းခြင်း၊ ပီဇာဆိုင်များငှားရမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းသောအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး၊ ငှားရန်စားနပ်ရိက္ခာထရပ်ကား၊ ငှားရန်လုပ်ငန်း၊ ငှားရန်ကားရေ၊ ငှားရန်ဘာဂါဗင်၊ ငှားရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ငှားရန်ကဖေး၊ ငှားရန်စားသောက်ဆိုင်များ၊ အငှားသန့်ရှင်းရေးစက်များ၊ ပိုင်ရှင်၊ လှပသောအလှပြင်ဆိုင်များ၊ နိုက်ကလပ်အငှားများ၊ ငှားရန်စတိုးဆိုင်များ၊ ငှားရန်အရက်ဆိုင်များ၊ ငှားရမ်းသောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ငှားရန်ကော်ဖီဆိုင်၊ အငှားစားရန်ဗန်၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများငှားရမ်းရန်၊ ငှားရန်, franchise စီးပွားရေးအတွက်ငှားရန်, ငှားရန်အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်, ငှားရန်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးနှင့်ငှားရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသန့်ရှင်းရေး။
လက်ရှိစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုငှားရမ်းခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများငှားရမ်းခြင်း။
တတ်နိုင် ငှားရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးငှားရမ်းခြင်းအတွက်စီးပွားရေးပွဲစားများ | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးငှားရမ်းခြင်းအတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ | အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးငှားရမ်းခြင်းအတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့မှစီးပွားရေးတိုးချဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအဖွဲ့သည်နိုင်ငံအသီးသီးမှကုမ္ပဏီများအားသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားပြင်ပကမ္ဘာသို့အောင်မြင်စွာမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်များသို့ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအောင်မြင်စွာမိတ်ဆက်နိုင်ရန်သင့်စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုသောအမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့မှာ - အထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စျေးကွက်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ အကောက်ခွန်စျေးကွက်သုတေသန၊ အဓိကနှင့်အလယ်တန်းနှစ်ခုလုံး၊ မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ SWOT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စျေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းနည်းဗျူဟာများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ , အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်နှင့်အခြားဆက်စပ်န်ဆောင်မှု။
စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးပွဲစားများ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးရှေ့နေများ စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးရှေ့နေများ
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝ - စီးပွားရေးအရဖော်ရွေသောဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
သင့်ကိုမြန်မြန်ကူညီပေးပါရစေ ကုမ္ပဏီထည့်သွင်း, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ရန်အဘို့။
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုရောင်းချရန် (သို့) ငှားရန်တင်ထားသင့်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏စီးပွားရေး ၀ ယ်သူအတွက်အရေးကြီးသည်။
စီးပွားရေးပွဲစား, အဆုံးနှစ် ဦး စလုံးတွေ့ဆုံရန်စေရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, စီးပွားရေးရောင်းသူနှင့်စီးပွားရေး၏ဝယ်။
သင့်ရဲ့ Submit ရောင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပါ - စာရင်းပြုစုပါ
စီးပွားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ရန် / ငှားရန်
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အစားအသောက်များ အင်ဂျင်နီယာ ဂိမ်းပြန်လည်ရောင်းချခြင်း အချိန်အား ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် လက်လီ န်ဆောင်မှုများ Tech & မီဒီယာ လက်ကားနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ပြန်လည်သုံးသပ် & အတည်ပြုပါ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရုရှားနိုင်ငံ UK ပြင်သစ် ဂျာမနီ ဂျပန် တရုတ်နိုင်ငံ ၾသစေတးလ် ရောင်းရန်စီးပွားရေး ဘရာဇီး စင္ကာပူႏုိင္ငံ
ပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု ငှားရမ်းထားသည် N / A
အရောင်း ၀ င်ငွေ
တိကျသောအရောင်း ၀ င်ငွေ
အပိုင်း A - ပတ်ဝန်းကျင်
အဆောက်အ ဦး အသေးစိတ်
နေထိုင်ရန်တည်းခိုခန်း: နေရာထိုင်ခင်းပါလျှင်ဤ box ကို check လုပ်ပါ။
အပိုင်း B - စစ်ဆင်ရေး
ပံ့ပိုးမှု & သင်တန်း
အပိုင်း C - စည်းကမ်းချက်များ
ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ စီးပွားရေးပြန်လည်နေရာချထားလို့ရနိုင်မလား။
စာရင်း / ကုန်ပစ္စည်း: စီးပွားရေးကိုအိမ်မှလည်ပတ်နိုင်လျှင်ဤအကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ဖြစ်နိုင်လျှင်တစ်နှစ်လျှင် (USD ဖြင့်သာ)
ဂိမ်း: စီးပွားရေးလုပ်ငန်း franchise ပြန်လည်ရောင်းချလျှင်ဤ box ကို check လုပ်ပါ။
အုပ်ချုပ်မှု / လက်ခံမှုဆိုင်ရာစီးပွားရေး: အကယ်၍ စီးပွားရေးသည်အုပ်ချုပ်မှု / လက်ခံမှုတွင်ရှိပါကဤ box ကိုအမှတ်ခြစ်ပါ။
ပိုင်ရှင်ငွေကြေးရရှိနိုင်သည် အကယ်၍ သင်စီးပွားရေးရောင်းဝယ်မှုကိုကူညီရန်ဆန္ဒရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤအကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ အရင်းအနှီးအားလုံးကိုဘဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဘဏ္financeာရေးပံ့ပိုးသူများထံမှငွေချေးမည့်အစားရောင်းသူမှရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုငှားရမ်းသည်။ ၀ ယ်သူသည်ချေးငွေကိုသတ်မှတ်ထားသောကာလတစ်ခုအတွင်းအရစ်ကျပြန်ပေးဆပ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်ပေးလိုသောမည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမဆိုဖော်ပြပါ။
အပိုင်း D - ပိုင်ဆိုင်မှုများ
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ ပရိဘောဂ၊ လ်တာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ဈေးနှုန်းတွင်ပါ ၀ င်ပါကဤအကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ပရိဘောဂများ၏တန်ဖိုး, ကရိယာများသို့မဟုတ် fittings (အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်)
စာရင်း / ကုန်ပစ္စည်း: ဈေးနှုန်းတွင်စာရင်း / စတော့ရှိပါကဤအကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
စာရင်း / စတော့အိတ်၏တန်ဖိုး
sudarshan Arumugam ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်၏ရောင်းရန်စာရင်းကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အနည်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ရက်ခွင့်ပြုပြီးထို site ပေါ်တွင်နေထိုင်ပါ။
သင့်စာရင်း ID မှာ (မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါကဤနံပါတ်ကိုကိုးကားပါ။ )
၀ ယ်သူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရာတွင်အကောင်းဆုံးသောဆန္ဒများကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိပါသည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုအလျင်အမြန်နှင့်အလွယ်တကူရောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအားလုံးလုပ်ပေးပါမည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ရန်
သင့်အားဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုသည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏စာရင်းအသေးစိတ်ကိုသင်၏ဒိုင်ခွက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါသည် Dashboard
အကြှနျုပျ၏ Dashboard ကို
အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံကိုလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ပါ
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုကိုတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပါ။
သိရန်လိုအပ် - ရောင်းရန်စီးပွားရေးရောင်းရန်စီးပွားရေး
အဆင့် 1: လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်
အဆင့် 2: သင်၏မျှော်လင့်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအရောင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းရွေးချယ်မှုကို
အဆင့် 3: စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလေ့လာပါ။
အဆင့် 4: သင့်ရဲ့ကြင်နာခွင့်ပြုချက်အဘို့အရရှိနိုင်ပါအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာပေးပို့ပါ။
အဆင့် 5: စာရင်းကိုင်နှင့်အခွန်အကွံဉာဏျ, ရှိလျှင်။
အဆင့် 6: ယုတ္တိကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရှင်းပြခြင်း။
အဆင့် 7: စီးပွားရေး ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကြပ်ခြင်း။
အဆင့် 8: တရားဝင်လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက်တရားဝင်လျှောက်လွှာ။
အဆင့် 9: အောင်မြင်မှု!
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်စီးပွားရေးအတွက်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၏စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်း ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် -
စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာအုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ စုဆောင်းသည့်အေဂျင်စီများ၊ စီးပွားဖြစ်ချေးငှားသူများ၊ ခရက်ဒစ်နှင့်ဘဏ္Financeာရေးကုမ္ပဏီများ၊ Factoring၊ အာမခံကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံ၊ အခြားဘဏ္Financialာရေး၊
တည်းခိုခန်းများ၊ အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ၊ ကဖေးများ၊ ခြံများ၊ အမြန်အစားအစာစင်တာများ၊ Hous ည့်အိမ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ နိုက်ကလပ်များ၊ ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးစင်တာများ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ပီဇာများတင်ပို့ခြင်း၊ အရက်ဆိုင်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ခြင်း၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ဂိုဒေါင်များ။
ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများ, ကလေးကစားခြင်း, ကွန်ပျူတာသင်တန်း, စင်တာများ, ကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေး, သူငယ်တန်း, ကျောင်းများ, ကျောင်းများ, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, နည်းပညာကောလိပ်များ, စမ်းသပ်မှုပြင်ဆင်မှုစင်တာများ။
စားသောက်ဆိုင်၊ စီးပွားရေး၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များ၊ ဥရောပစားသောက်ဆိုင်များ၊ အမြန်အစားအစာဖက်စပ်များ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ရေခဲမုန့်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ ပီဇာပို့ဆောင်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ ဆူရှီ / ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ၊
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၊ အားကစားရုံများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ၊ အိမ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ၊ ဆေးကုသမှုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များ၊ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များ၊ ရောဂါဗေဒစင်တာ။
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အ ၀ တ်အစားနှင့်ဖိနပ်များ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပရိဘောဂထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
ကွန်ပြူတာသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းပေးခြင်း၊ ဒိုမိန်းအမည်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုဒ်များ၊ ISP များ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ အိုင်တီထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အိုင်တီထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊
စိုက်ပျိုးရေးမြေများ, စိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, Ranch ။
လေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ လှေတည်ဆောက်သူများနှင့်ပြုပြင်ခြင်း၊ လှေငှားရမ်းခြင်း၊ ကားငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကားရေ၊ ကုန်သွယ်ရေးယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ယာဉ်မောင်းကျောင်းများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊
သင်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ၀ ယ်ယူပြီးတိုင်းပြည်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအားကူညီခြင်းဖြင့် -
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ဒါရိုက်တာ (များ) အတွက်။
ရောင်းရန်စီးပွားရေး New Zealand
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး Papua New Guinea
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး Antigua နှင့် Barbuda
Puerto Rico ရောင်းရန်စီးပွားရေး
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Saint Kitts
စီးပွားရေးရောင်းရန် Czech Republic
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး Mar Marino
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး United Kingdom
ရောင်းရန် Business Kuwait
ရောင်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Arkansas ပြည်နယ်
ရောင်းရန် Business Maine
ရောင်းရန် Business Missouri
ရောင်းရန်ရှိသော New Hampshire ရှိစီးပွားရေး
ရောင်းရန်စီးပွားရေး New Jersey
ရောင်းရန်စီးပွားရေး New Mexico
North Carolina မှရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး
ရောင်းရန် Business Oregon
ရောင်းရန်စီးပွားရေး Rhode Island
South Carolina မှရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး
ရောင်းရန်စီးပွားရေး South Dakota
ရောင်းရန်ရှိသော Tennessee စီးပွားရေး
ရောင်းရန်ရှိသော ၀ ါရှင်တန်
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး 107 နိုင်ငံများ! ဆက်သွယ်ရန်